ကမ်းခြေမှာဖိနပ်မစီးလို့ ခြေဖဝါးအရေပြားထဲ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် ခဲ့တဲ့ သန်ကောင်တဲ့ ..ကြောက်စရာကြီးနော် – Shwe Likes
ကမ်းခြေမှာဖိနပ်မစီးလို့ ခြေဖဝါးအရေပြားထဲ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် ခဲ့တဲ့ သန်ကောင်တဲ့ ..ကြောက်စရာကြီးနော်
သင်ဟာ ကမ်းခြေ ကို ခရီးထွက်ဖို့ စဉ်းစားနေပါသလား..? ။ ခြေဗလာ နဲ့ သဲသောင် ရဲ့ အရသာ ၊ ပင်လယ် ရဲ့ အရသာ ကို ခံစားချင်ပါသလား…? ။ ဒီစာကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် မှာ အဆင်ပြေမယ့် အကာကွယ်ယူ ဖို့ ပြန်တွေးကောင်း တွေးမိပါလိမ့်မယ် ။ အသက် (၃၁) နှစ်အရွယ် Nurul ဟာ လောလောဆယ် Part Dickson ကမ်းခြေကို မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ပွဲစားထွက်နေစဉ်မှာ အဆိုးဝါးဆုံး အိပ်မက်ဆိုးကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ် ။
သူမဟာ ကမ်းခြေကို ခြေဗလာနဲ့ လမ်းလျောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ခြေဖဝါးမှာ သန်ကောင်ကူးဆက်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့ကြုံကို Facebook မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသန်ကောင်ကူးဆက်မှုဟာ Cutaneous Larva migrans လို့ လူသိများတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာတတ်တဲ့ သန်ကောင်မျိုးဖြစ်ပြီး-
သူမရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြေဖဝါးဟာ သန်ကောင်ရဲ့ နေအိမ်တခုလို ဖြစ်နေတယ်လို့ သူမက ရှင်းပြပါတယ်။ ပထမတော့ တစ်ပတ်လောက်ကြာအောင် ခြေခဖဝါးပေါ်မှာ လှိုင်းတွန့်ပုံလေးတွေ ပေါ်နေပါတယ်။ ဒါကို သူမက ခရီးသွားပြီးတဲ့နောက် အာရုံကြောအားနည်းလို့ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ ခြေဖဝါးက အရေးပြားအလွှာထဲမှာ အဖုအပိန့်လေးတွေ ထွက်နေတာ မြင်လိုက်ရတော့ တစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ခြေညှပ်ဖိနပ်ကြောင့် အရေကြည်ဖု ပေါက်တာပဲလို့ ထင်လိုက်မိပါတယ်။ နောက်တော့ ခြေဖဝါးက လိုင်းကြောင်းလေးတွေက ရောင်ကိုင်းနေသလိုမျိုး အပြင်ကို စူထွက်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူက အရေးကြီးတယ်လို့ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ Nurul ဟာ အနှိပ်သည်ကို နှိပ်ခိုင်းရင်း မေးတဲ့အခါမှာ အနှိပ်သည်က ဒါ အာရုံကြောပြဿနာလို့ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေထောက်တွေကို အနှိပ်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူရဲ့ ခြေဖဝါးက မခံမရပ်နိုင် ယားယံလာခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့ စူထွက်နေတဲ့ လိုင်းကြောင်းပုံပါတဲ့ ခြေဖဝါးပုံကို Facebook ပေါ်တင်ပြီး ဘာဖြစ်တာလဲလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ဖြေတဲ့အဖြေ တော်တော်များများက ဒါဟာ သန်ကောင်ပဲလို့ ဖြေကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရင်က ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စာထဲမှာ ဖတ်ဖူးထားကြလို့ပါပဲ။
မိသားစုဝင်တွေ တိုက်တွန်းချက်ကြောင့် Nurul ဟာ Ara Damansara ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတစ်ခုကို ဆေးစစ်ဖို့ သွားလိုက်ပါတယ်။ Nurulရဲ့ ပြောပြချက်အရ ပထမတော့ ဆရာဝန်က သံသယဖြစ်သွားပါတယ်။ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့မှ အရေပြားထဲဝင်နေတဲ့ သန်ကောင်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါတယ်။
Nurul ကို ဆရာဝန်က လောလောဆယ် ကမ်းခြေကို သွားခဲ့သလားလို့ ဆက်မေးလိုက်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်က ကမ်းခြေကို သွားခဲ့တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဒါဟာ ခြေဖဝါးအရေပြားထဲ ဝင်နေတဲ့ သန်ကောင်ပဲဆိုတာကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က ကမ်းခြေမှာ ခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေ မစင်စွန့်တာကြောင့် သန်ကောင်တွေ အများအပြားရှိတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပါတယ်။ ကမ်းခြေကလည်း နွေးနေတယ်၊ ကြောင်တွေ၊ ခွေးတွေကလည်း မစင်စွန့်တယ်၊ အဲဒါကြောင့်မို့ ဒီသန်ကောင်တွေက-
ကြောင်တွေ၊ ခွေးတွေရဲ့ မစင်ကနေ ရောက်လာတာဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ ဒီသန်ကောင်ဟာ ညမှာ ပိုမိုလှုပ်ရှားလေ့ရှိပါတယ်။” လို့ ပြောပြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်နေရာကို သွားသွား ဖိနပ်စီးကြဖို့နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကွေးကွေး ကောက်ကောက် အစင်းကြောင်းတွေ ဖြစ်နေသလားလို့ သတိထားကြစေချင်ပါတယ်။
မင်းနွယ်ခန့် (D Nae Thit)
Credit-BAMAKHIT (လေးစားစွာဖြင့် )
Previous post ဗစ်တိုးရီးယားအမှု အတွက်အလှူခံထားသော ဘဏ်အကောင့် ဆိုင်းငံ့ထားရန် ဗဟိုဘဏ် မှ ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း မရှိဟုဆို
Next post Ybs ပေါ်တွင် ခါးကိုဓားဖြင့် ထောက်ကာ ခါးပိုက်နှိုက်မှု….YBS စီးတယ့် လူတိုင်း သတိထားကြပါ